Sheekh Shariif oo qaadaya tallaabo lagu ogaanayo awoodiisa doorashada - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Shariif oo qaadaya tallaabo lagu ogaanayo awoodiisa doorashada
Sheekh Shariif oo qaadaya tallaabo lagu ogaanayo awoodiisa doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kamid ah xubnaha ugu cadcad xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa qaadaya tallaabo uu ku ogaanayo culeyskiisa doorashada madaxweynaha iyo codadka uu heli karo.
Shariif Sheekh Axmed wuxuu noqday musharixii koowaad ee miiska keena inuu wato musharax uu u rabo xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baaramaanka Soomaaliya, xilli xubnaha kale ee midowga musharixiinta ka dhuumanayaan inay qof gooni ah taageeraan, iyadoo aaminsan inay taasi codad ka lumin karto, balse Shariif iyo kooxdiisa cabsi dhinacaas ah ma qabaan.
Qofka uu Shariifka miiska keenay waa Sheekh Aadan Maxamuud Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo horey u soo hoggaamiyey Baarlamaanka Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan kooxdiisa, 3 faa’ido ayey uga dhex jeedaan inay bannaanka u soo istaagaan dhismaha Sheekh Aadan Madoobe.
1- Tijaabin awoodeed
Shariif Sheekh Axmed iyo kooxdiisa waxay rabaan inay tijaabiyaan awoodooda doorashada, inay loolanka guddoonka Baarlamaanka ku adkaadaan waa waxa ugu muhiimsan, balse haddii ay noqdaan kooxda laga adkaanayo oo kaalinta labaad yimaadaan waxaa si fudud loo akhri doonaa in doorashada madaxweynaha ay yihiin mid kamid ah labada koox ee tartanka rasmiga ah uu ka dhaxeeyo.
Haddii uu Sheekh Aadan Madoobe meel hoose ka galo doorashada golaha shacabka waa farriin kale oo adag, balse u sahli karta inay fahmaan meelaha ay ka liitaan.
Mar walba tartanka uu xisbigooda u galayo kursiga guddoonka Golaha Shacabka waxay u arkaan tijaabadooda doorashada madaxweynaha.
2- Hubinta ballanta xildhibaanada
Xubno badan oo kusoo baxay doorashada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa durba waxay ballan la dhex mareen musharixiinta, ballanta waa inay codka sii doonaan,
Xildhibaanada qaarkood waxaa laga yaabaa inuu ballankaasi ka ahaa hadal ay ku qaadanayeen sooryo siyaasadeed, laakiin marka uu Shariifka sharaxo Sheekh Aadan Madoobe wuxuu eegayaa inta xildhibaan ee bannaanka u soo istaagta qadiyadaas ee ballanta oofisa.
Xitaa marxaadaan waxaa lagu sii baran karaa xildhibaanada lacagta qaadanaya ee codkana u leexinaya meel kale, si fudud marka loo dhaho tartankaan waa isbarashada Sheekh Shariif iyo xildhibaanada Baarlamaanka 11-aad.
3- Hadal heynta lacag-yarida
Sheekh Shariif waxaa doorashadii hore ee Soomaaliya la sheegaa inuu dhaqaale ahaan u dhaqaaqi waayey, inuu sanadkaan hayo tabar uu ku dhiso guddoomiye Baarlamaanka waxay ka dhigan tahay inay jirto isku filnaansho dhanka madaxweynaha ah.
Tani waxay hoos u dhigi doontaa mid kamid ah su’aalaha mar kasta ololihiisa la geliyo oo ah dhanka jeebka.